Khubaro Mareykan ah oo gaaray Nigeria - BBC Somali
Khubaro Mareykan ah oo gaaray Nigeria
9 Maajo 2014
Image caption Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka
Xoghayaha arrimaha dibadda e Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in koox khubaro ameerikaan ah ay gaareen dalka Nigeria si ay gacan uga gaystaan sidii loo ogaan lahaa halka lagu haya in kabadan laba boqol oo gabdhood oo ciyaal iskuul ahaa oo ay qafaasheen dad lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin kooxda islaamiga ee Boko Haram.
Kooxdan ayaa sidoo kale ka qeyb galaya soo furashada gabdhahan marka la ogaado meesha lagu hayo.
Kal hore, madaxweynaha dalkaasi Nigeria Goodluck Jonathan ayaa sheegay in argagixisnimadu ay tahay khatarta ugu weyn ee dalkiisa uu wajahayo.
Mr Jonathan ayaa BBC-da u sheegay inuu awoodo soo afjaro falalka argagixisnimada, uuna gabdhahaasi dib u soo furan karo haddii uu taageero ka helo caalamka.
Madaxweyne Jonathan ayaa waxa uu la kulmayaa cadaadis uga imaanaya gudaha dalkiisa iyo caalamka intiisa kale, kaasi oo lagu doonaya in uu sameeyo wax kastaa oo karaan kiisa ah si loo soo badbaadiyo gabdhahaasi la qafaashay.
“Gabdheheena dib u soo celiya”
Olole internetka ka socdo ee lagu dalbanayo siideynta in kabadan 200 oo gabdhood oo laga Afduubtay iskuul ku yaalla gobolka Borno ee dalka Nigeria oo ay afduubteen kooxda Boko Xaraam ayaa hadda ku baahay dhammaan qeybaha caalamka.
Ololahan oo markii hore ku ekaa Nigeria ayaa hadda ku fiday dacallada aduunka.
Qoraal lagu shaaciyay baraha Bulshada ee internetka oo ahaa “dib u soo celiya gabdheheena” ayaa in kabadan hal milyan oo qof ay dib u sii faafiyeen.
Image caption Sawir ka mid ah kuwa caalamka lagu baahiyay
Sedax Isbuuc ayaa laga joogaa tani iyo markii la afduubtay in kabadan 200 oo gabdhod, kuwaas oo ay afduubteen kooxda Boko Xaraam.
Balse, dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay ayey warbaahinta bulshada si aad ah uga dhexmuuqatay dhibaatada gabdhahan.
Balse dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee ay BBC-da soo bandhigtay ee ahaa, “Soo Celi Gabdheheena” ayaa hadda gaaray meelo aad uga baxsan Nigeria, Mareykanka, Yurub, iyo koofurta Afrika.
Ololahaasi, waxa uu gaaray meelo ay ka mid yihiin Koofurta Bari ee qaaradda Aasiya, Hindiya iyo koofurta Amerika.
Dad can ah oo ka qeybgalaya ololaha
Farrintan lagu qoray bogagga bulshada ee internetka, waxaa dib looga jawaabay in kabadan 1.7 milyan oo jeer tani iyo markii ugu horeysay ee la baahiyay, 23-kii Bishii April.
Taasina aad waxay uga badan tahay jawaabihii isbuuc ka hor oo gaarayay 360,000 oo jeer oo keli ah.
Hadaba maxay tahay waxa isbedelay? Taageerada dad can ah, sida Malala Yusufzia, oo ah gabar iskuuley aheyd oo ka badbaaday dhaawac ay u geysteen kooxda Taalibaan, ayaa internetka ku gelisay sawirkeeda horraantii Isbuucan, taasoo noqotay wax aad usoo jiitay dareenka caalamka.
Laakiin kuma eka oo keli ah Malala, balse marwada madaxweynaha dalka Mareykanka Michelle Obama ayaa internetka gelisay sawir ay gacanta ku hayso warqad ay gacanteeda ku qortay, waxayna leedahay, “soo celiya gabdheheena”, sawirkaasi ayaa dib loo siifaafiyay in kabadan 40 kun oo jeer.
Image caption xaaska madaxweynaha Mareykanka oo ka qeyb galeyso ololaha gabdhaha la qafaashay
Xogahiyihii hore ee dalka Mareykanka, Hillary Clinton ayaa ku tiray firriin ay internetka ku qortay "Helidda adeeg waxbarasho waa xuquuq aasaasi ah”. Sidoo kale, xidigaha shirkadda aflaanta ee Hollywood, sida Angelina Jolie waxay ay ku baaqayaan tallaabo adag in la qaado.
Warbixin ay sheecisay barnaamij softwera ah oo lagu magacaabo Crimson Hexagon ayaa muujinaya in ololaha baraha bulshada caalamka uu aad kor ugu kacay labadii maalin ee la soo dhaafay.
99 kun oo jeer waxay ka timi dalka Mareykanka – halka 52 kun oo jeerna ay ka timi dalka Nigeria waxaana la sheegayaa in xiisaha mareykanka ee sheekadan inay Nigeria ku riixday baraha bulshada ee caalamka.
Sikastaba, sawiradii ugu dambeeyay, waxaa suurtagal ah inay xiiso aad u qoto dheer ay arrinta ku yeelatay bariga dhexe halkaas oo ay horraantii isbuucan ay ka bilaabatay Farriinta ah “gabdheheena dib u soo celiya”.